Previous Article Gọọmenti Anambra eguzobela òtù ọrụ pụrụ iche maka nsogbu dị n'etiti Omor na Umumbo
Next Article Korona: Ọkammụta Sam Ụzọchukwu Ekèéla Ụmụnwaanyị Ego n'Ebenator
Ụlọ ọba ego 'First City Monumente Bank' (FCMB) nọrọ na nso nso a wee bunye gọọmenti steeti Anambra akpa osikapa ruru narị asatọ na iri ise, iji kwàdo ya n'agha ahụ ọ na-ebu megide mgbasa ọrịa nje korona nakwa mmetụta nke oge ọrịa ahụ n'ahụ ụmụafọ steeti ahụ.
Ka ọ na-enyefe gọọmenti ego ahụ n'obi gọọmenti dị n'Awka, onyeisi ngalaba nke abụọ nke ụlọ ọba ego ahụ n'Awka, bụ Maazị Victor Agumadu kọwara nke ahụ dịka ótù n'ime ụzọ ụlọ ọba ego ahụ si atụnye ụtụ nke ya n'ibelàta ihe dị iche iche ụmụ mmadụ na-agabiga n'ime oge a ọrịa korona na-ebi ụwa aka ọjọọ.
O kelere gọọmenti steeti Anambra maka ezi ọnọdụ dị larịị o nyere ụlọ ọba ego ahụ n'ime steeti ahụ, kelekwa ya maka ihe dị iche iche o megoro n'agha ọ na-ebu megide ọrịa korona, ma dụọ ya ka o jisie ike na-eleghị anya n'azụ.
Onye nabatara ihe onyinye ahụ n'aha gọọmenti, ma bụrụkwa ode akwụkwọ izugbe steeti ahụ, bụ Ọkammụta Solo Chukwulobelu kelere ya bụ ụlọ ọba ego maka ịza ọkpụkpọ oku ahụ gọọmenti steeti ahụ kpọrọ maka mgbata ọsọ na nkwàdo site n'aka ndị mmadụ, ụlọọrụ nakwa òtù dị iche iche.
O nyekwazịrị òwùwè anya na a ga-etinye ihe ndị ahụ e wèkọtàra n'ọrụ etu o siri kwesi, ma mekwa ka nke e kwesiri ikesà ekesà ruo ndị e mebeere ha aka.
O kwupụtakwara na aka na-achị steeti ahụ, bụ Gọvanọ Willie Obianọ àkwàdola ma nyekwa ntụziaka ka e kesàá ụfọdụ ihe oriri dị iche iche a tụkọtara nyegara ezinụlọ iri ise ihe kacha esiri ike n'ime steeti ahụ, bụkwa ndị debànyègoro aha n'ụlọọrụ steeti ahụ na-ahụ maka ihe metụtara ụmụnwaanyị na ụmụaka, bụ.
O kelekwazịrị ndị zagoro ọkpụkpọ oku gọọmenti steeti ahụ banyere ọrịa ahụ, ma kwàdokwa ya bụ gọọmenti n'ụzọ dị iche iche, iji nweta mmeri n'agha ahụ ọ na-ebu megide ya bụ ọrịa.